गैर विषाक्त रंगीन धुआं बम्ब्स
तपाईंले पढ्न सक्नुहुनेछ कि यूट्यूब रंगित धुम्रपान बम भिडियो फिक गरिएको छ, भिडियोले सैन्य धुआँ बम देखाउँदै, नुस्खा प्रयोग गरी बनाइएको धुम बमको सट्टा नक्कली ट्यापसँग मास्किएको छ। मलाई लाग्छ कि सम्भवतया सत्य हो, तर यसले रंगीन धुआन बमको लागि नुस्खालाई अमान्य पार्दैन (यद्यपि मैले सिफारिसहरू सुनेको छु कि तपाईंले बेकिंग सोडा थप्नबाट बचाउन सक्नुहुनेछ - मैले हेर्दै छु)।
रंगीन धुआं बम नयाँ छैनन्। अन्य व्यंजनहरू मैले सूचीबद्ध गरेको मिति 1936 सम्मसम्म। एउटा रंगीन धुवाँ बम एक सामान्य धुआँ बम हो। चालले डाई हवामा हावा गर्नु भन्दा सजिलो छ।
म धुआँं बमहरूको सुरक्षाको बारेमा धेरै प्रश्नहरू पाउछु। के धुम्रपान बम बनाउन पछि खानाको लागि तपाईंको cookware प्रयोग गर्न सुरक्षित छ? के धुआनले गैर-विषैले बम बिर्सन्छ? धुआं बम विषाक्त देखि विष धुनु हुन्छ?
क्लासिक धुआं बम बृद्धि धेरै सुरक्षित छ। अवयवहरू चिनी र नमक हुन्छन्। मलाई लाग्छ हामी स्वीकार्न सक्छौं कि चिनियाँ गैर-विषाक्त हुन्छ। यदि तपाईं नमकपाटर (पोटेशियम नाइट्रेट) को लागि MSDS पढ्नुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई देख्नुहुनेछ कि तपाईंले फ्याँक्नु हुनेछ, र अन्य नाइट्रेटहरू जस्तै यो यसलाई नाइट्रिटमा बदल्न सकिन्छ, त्यसैले बच्चाहरू खानेकुरा राम्रो छैन, तर यो एक छैन विष। तपाईंले धुआँ बमलाई स्वाद गर्नुपर्दैन, धेरै कम यसलाई खान्छ, तर यदि तपाईले गर्नुहुन्छ भने, यो सम्भव छैन कि तपाईं मर्नु हुनेछ (कल पोइजन नियन्त्रण)।
यदि धुलो बम बनाउन पछि तपाइँले कुकिङलाई धोका दिनुहुन्छ, यो खाना पकाउन सुरक्षित हुनेछ। मलाई नोट गर्नु पर्छ: तपाईं आफ्नो पनलाई यो नुस्खा संग बर्बाद गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं कैंडी बनाउनुभएको छ (बिस्तारै), तपाईं जलाश्री शर्करा र प्यानहरू राम्ररी जान हुँदैन। तपाईंको श्वसन प्रणालीको लागि धुवाँ कणहरू राम्रो हुँदैनन्। धुआँ बमबाट धुनुको क्याम्प फायरबाट धूम्रपान भन्दा बढी वा कम सुरक्षित छैन।
वास्तवमा, क्याम्प फायर धूम्रपान खराब छ, तर यसले तपाइँलाई एक प्रकारको सुरक्षा बेंचमार्क दिन्छ।
रंगीन धुआं बम बमोजिम ... म कार्बनिक डाई खाएको थिएन, न त म जानबूझेर यसलाई साँस पार्छु। विशेष डाईको MSDS ले तपाइँले छनौट गर्नुहुनेछ र तपाईलाई MSDS पढ्न सक्नुहुनेछ। मैले यो प्रयोगशालामा केहि चीज बनाउनेछु, मेरो भान्सा छैन। धूमपानको लागि होईन, को लागी होइन। यो रसायन विज्ञानको सुरक्षाको साथमा पर्दछ। यो सुरक्षित छ यदि तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ र सावधानीहरू प्रयोग गर्नुहोला, तर औसत व्यक्ति बनाउन चाहने केहि छैन।
कसरी सल्फर क्रिस्टल बनाउन
कलेज विज्ञान मेला परियोजनाहरू
हेलोवीन विज्ञान परियोजनाहरू
गन्धमा डार्क बतख टेप ट्रकोल्युनिसेन्स
सुनील्याण्ड्स, 1966, रिच र प्रसिद्ध को घर
अंग्रेजीलाई निरन्तरता र झूटो शुरुवात गर्ने शिक्षण
पुस्तक र गिलिलो गैलीली द्वारा पुस्तकहरू
पुनरुत्थान परिमार्जक (व्याकरण)
20 औं शताब्दीका पपहरू
जाभास्क्रिप्ट कार्यान्वयन आदेश
कसरी एक जीप वानरलर हार्ड शीर्ष हटाउन
कोलम्बिया एफएसी ग्यारेला समूहको प्रोफाइल
समीक्षा: Bridgestone Potenza RE970 को रूप मा ध्रुव स्थिति
जर्मनको शुरुवातका लागि: पाठ 11 - दिनुहोस र लिनुहोस् - गेबेन, नेहेमेन
'बेला सिसिसी एन्जेलो' गीत र पाठ अनुवाद
कण - बाकरी
कालो प्यानर पार्टी उत्पत्ति र इतिहास
आगो मौसम के हो?
वजन घटाने को लागि बाइकिङ
शीर्ष9गीत गाने साइटहरु
पढ्ने बहुभाषी शिक्षण विधि
मोलोरीको "टार्टफे" मा डोरेन मोनोलोगुज
कसरी एनोड र क्याथोड परिभाषित गर्नुहोस्
नोरा हेलरको चरित्र